လိုချင်ရင် အကုန် ယူသွား သွေးသား ရတနာလေးတော့ တို့ရင်ခွင် ထဲ ထားရစ်ခဲ့ပါ ဆိုတဲ့ ထက်ထက်မိုးဦး …. - CeleLove
လိုချင်ရင် အကုန် ယူသွား သွေးသား ရတနာလေးတော့ တို့ရင်ခွင် ထဲ ထားရစ်ခဲ့ပါ ဆိုတဲ့ ထက်ထက်မိုးဦး ….
May 15, 2019 Cele Love အနုပညာလောက 0
ပရိသတ်ကြီးရေ တစ်ခေတ်တစ်ခါ မှာ အောင်မြင်ကျော်ကြား လူကြိုက်များခဲ့တဲ့ အကယ်ဒမီ ထက်ထက်မိုးဦးကတော့ ပရိသတ်တွေရဲ့ ရင်ထဲမှာ နေရာအပြည့်ယူ ထားနိုင်တဲ့ မင်းသမီးချော တစ်လက်ပဲဖြစ်ပါတယ် …။
အနုပညာကို ဝါသနာ ပါပြီး ရုးသွပ်တဲ့သူ တစ်ယောက်ဖြစ်လို့ အမြဲတမ်းကြိုးစားလုပ်ဆောင်နေပြီး ပရိသတ်တွေ ရဲ့ အချစ်များစွာ ကို ပိုင်ဆိုင် ထားတာပါနော် …။
ထက်ထက်မိုးဦး ပါဝင်သရုပ်ဆောင်ထားတဲ့ ဇာတ်ကားတွေကို ဆိုရင် လည်း ပရိသတ်တွေက တစ်ခဲနက် ကို အားပေးကြပါတယ် …။
ထက်ထက်မိုးဦးက ယခုချိန် မှာတော့ သူမနဲ့ တူတဲ့ ချစ်စရာ သမီးလေးတစ်ယောက်ကို ပိုင်ဆိုင်ထားပြီး အနုပညာ အလုပ်တွေကို ဖြည်းဖြည်းမှန်မှန်လုပ်ဆောင်နေဆဲပဲ ဖြစ်ပါတယ် …။
အသက်အရွယ် တစ်ခုကို ရောက်ရှိလာပေမယ့် နုငယ်ပျိုမျစ်နေတဲ့ အလှ အပတွေက ငယ်တုန်းကလို အရမ်းလှနေဆဲပါနော်။ထက်ထက်ရဲ့ ချစ်စရာကောင်းတဲ့ အမူအရာလေးတွေနဲ့ စကားပြောဟန်လေးတွေက ပရိသတ်တွေ ကို ဘယ်တော့မှ မရိုးသွားစေ ပါဘူး …။
အခုဆိုရင်တော့ ထက်ထက်မိုးဦးက”အရာအားလုံး နဲ့လဲပါ့မယ် စိန်တွေ ရွှေတွေ ငွေတွေ တိုက်တွေ ကားတွေ မမက်ဘူး”တို့” ရဲ့ သိက္ခာ “တို့” ရဲ့ မာန “တို့” မှာ ရှိသမျှ ပစ္စည်းဥစ္စာတွေ အားလုံးပေးဖို့ “တို့” ဝန်မလေးဘူး “ယူ” လိုချင်ရာ
အကုန်ယူသွား သွေးသားရတနာလေးတော့ “တို့” ရင်ခွင်ထဲ ထားရစ်ခဲ့ပါ အရာအားလုံး နဲ့လဲပါ့မယ်”ဆိုပြီး သမီးလေးနဲ့ပက်သက် တဲ့ ရင်တွင်းခံစားချက်လေးတွေကို ရေးသားထားပါတယ်နော် ။ ။
လိုခငျြရငျ အကုနျ ယူသှား သှေးသား ရတနာလေးတော့ တို့ရငျခှငျ ထဲ ထားရဈခဲ့ပါ ဆိုတဲ့ ထကျထကျမိုးဦး ….
ပရိသတျကွီးရေ တဈခတျေတဈခါ မှာ အောငျမွငျကြျောကွား လူကွိုကျမြားခဲ့တဲ့ အကယျဒမီ ထကျထကျမိုးဦးကတော့ ပရိသတျတှရေဲ့ ရငျထဲမှာ နရောအပွညျ့ယူ ထားနိုငျတဲ့ မငျးသမီးခြော တဈလကျပဲဖွဈပါတယျ …။
အနုပညာကို ဝါသနာ ပါပွီး ရုးသှပျတဲ့သူ တဈယောကျဖွဈလို့ အမွဲတမျးကွိုးစားလုပျဆောငျနပွေီး ပရိသတျတှေ ရဲ့ အခဈြမြားစှာ ကို ပိုငျဆိုငျ ထားတာပါနျော …။
ထကျထကျမိုးဦး ပါဝငျသရုပျဆောငျထားတဲ့ ဇာတျကားတှကေို ဆိုရငျ လညျး ပရိသတျတှကေ တဈခဲနကျ ကို အားပေးကွပါတယျ …။
ထကျထကျမိုးဦးက ယခုခြိနျ မှာတော့ သူမနဲ့ တူတဲ့ ခဈြစရာ သမီးလေးတဈယောကျကို ပိုငျဆိုငျထားပွီး အနုပညာ အလုပျတှကေို ဖွညျးဖွညျးမှနျမှနျလုပျဆောငျနဆေဲပဲ ဖွဈပါတယျ …။
အသကျအရှယျ တဈခုကို ရောကျရှိလာပမေယျ့ နုငယျပြိုမဈြနတေဲ့ အလှ အပတှကေ ငယျတုနျးကလို အရမျးလှနဆေဲပါနျော။ထကျထကျရဲ့ ခဈြစရာကောငျးတဲ့ အမူအရာလေးတှနေဲ့ စကားပွောဟနျလေးတှကေ ပရိသတျတှေ ကို ဘယျတော့မှ မရိုးသှားစေ ပါဘူး …။
အခုဆိုရငျတော့ ထကျထကျမိုးဦးက”အရာအားလုံး နဲ့လဲပါ့မယျ စိနျတှေ ရှတှေေ ငှတှေေ တိုကျတှေ ကားတှေ မမကျဘူး”တို့” ရဲ့ သိက်ခာ “တို့” ရဲ့ မာန “တို့” မှာ ရှိသမြှ ပစ်စညျးဥစ်စာတှေ အားလုံးပေးဖို့ “တို့” ဝနျမလေးဘူး “ယူ” လိုခငျြရာ
အကုနျယူသှား သှေးသားရတနာလေးတော့ “တို့” ရငျခှငျထဲ ထားရဈခဲ့ပါ အရာအားလုံး နဲ့လဲပါ့မယျ”ဆိုပွီး သမီးလေးနဲ့ပကျသကျ တဲ့ ရငျတှငျးခံစားခကျြလေးတှကေို ရေးသားထားပါတယျနျော ။ ။
“ကမ္ဘာအနှံ့က သတိထားမိသွားပြီး ကိုရီးယားသတင်းမှာတောင် ပါလာတဲ့ နေမင်းရဲ့ ဗီဒီယို”
ရဲတွေ ဖြိုခွင်းပြီးတဲ့နောက် ဘိလပ်မြေစက်ရုံကို ရွာသားတွေ မီးရှို့လိုက်ပါပြီ